Impact of exclusive institutions, Inclusive institutions and economic development | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« UNHCR is discussing with Malaysia and Myanmar Government to agree to issue 6P like documents to UNHCR REJECTED Myanmar refugee seekers
If getting DISLIKES could lead to deletion of FB posts, FB should just deactivate ALL the Myanmar FB users »
Impact of exclusive institutions, Inclusive institutions and economic development
So you can clearly see that Myanmar Tatmadaw is practising the EXCLUSIVE Politics to even Bama Buddhist civilians, Ethnic Minorities and Religious Minorities. Even for those with only cursory knowledge of the region would be clear that the countries that installed the most open, democratic and inclusive political regimes are also the most economically successful ones.
နောက်ထပ်အရေးပါလှတဲ့ ကဏ္ဍကတော့ မီဒီယာတွေရဲ့ ကဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စိးပွားရေး ကိစ္စ တွေမှာ လက်ရှိအာဏာရနေသူတွေ လမ်းလွဲနေတာတွေ၊ မဟုတ်တရုတ်လုပ်နေတာကို ပြည်သူလူထုထဲ ကျယ် ကျယ်ပြန့် ပြန့် သိသွားအောင်၊ သိနေအောင် လုပ်ပေးနိုင်တာ မီဒီယာတွေပဲ ရှိပါတယ်။ နေရာဒေသအသီးသိးက လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းလို့ ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တာလည်း မီဒီယာပါပဲ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ မြင့်တက်လာတဲ့ စွမ်းအားအရှိန်အဟုန်ကို ပြန်ကျမသွားအောင် ထိန်းထားပေးတဲ့နေရာမှာလည်း အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်ကြားရင်း၊ ပညာပေးရင်း၊ ဖျော်ဖြေရင်းနဲ့ ဒိအရှိန်အဟုန်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းပေးထားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အမေရီကန်နိုင်ငံ ဒိနေ့ ဒီလိုအဆင့်ထိ မြင့်တက်လာနိုင်ခဲ့တာဟာ Inclusive Institutions တွေကို အန္တရာယ်ပြုမယ့် လူတွေ အဖွဲ့ အစည်းတွေအကြောင်းကို မီဒီယာတွေက လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်သတိပေးခွင့်ရနေပြီး တာဝန်ကျေခဲ့ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစိအင်အားစုတွေကို စုစည်းညီညွတ် လာအောင် မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့ကြတာလည်း အမေရိကန် မီဒီယာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းအားမြင့်လာ တဲ့ လူထုအဖွဲ့ အစည်းတွေကိုေ၇ရှည်တည်တံ့နိုင်မယ့် နိုင်ငံေ၇းပါတီကြီးတွေအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်အောင် လမ်းညွှန် အကြံပေးခဲ့သူတွေကတော့ ဗြိတိသျှမီဒီယာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ၊ စာအုပ်တွေ ဟာ အင်္ဂလန်တော်လှန်ရေး၊ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအချိန်ကစလို့ ၁၉ ရာစုခေတ် ဗြိတိန်ဒိမိုကရေစီ အရေးအ ခင်းတွေအထိ ပြည်သူလူထုကို သတင်းပေးရာ၊ လှုံ့ဆော်ပေးရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍက ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပါပဲ။ IT နည်းပညာနဲ့ အတူ အသစ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ Web blogs, Facebook, Twitter, Anonymous Chats စတာတွေဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က အီရန်သမ္မတ အမာတီနီဂျတ် ကျူး လွန်တဲ့ မဲမသမာမှုနဲ့ နောက်ဆက်တဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေ ကို ဖော်ထုတ်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတွေ ဖြစ် လာပါတယ်။ အာရပ်နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ဖြစ်စေခဲ့ရာမှာလည်း ဒီမီဒီယာတွေက အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင် နေခဲ့တာကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
(အဘယ်ကြောင့်နိုင်ငံများကျ ရှုံးရသနည်း by ဒေါက်တာအောင်မြင့်-ဆေးမန်း)
Acemoglu & Robinson, 2012 argue, however, that exclusive economic and political institutions (which they term ‘extractive’) will not support sustainable growth in the long term. This is because they do not enable dynamic innovation and investment, thought to be the engine of growth. Moreover, exclusive political institutions generate political conflict between groups and individuals (Acemoglu & Robinson, 2012: 430). Further,asubstantial body of qualitative research indicates that exclusive institutions, including discriminatory social norms, trap people in exploitative relationships and push them into chronic poverty (Chronic Poverty Research Centre, 2008: 5-6). Political exclusion and inequality between regional, religious, or ethnic groups has also been linked with higher risks of civil war (World Bank, 2011a: 6).
Source: Impact of exclusive institutions
In substantive terms the critique boils down to the question whether democratic (inclusive) institutions …Even for those with only cursory knowledge of the region would be clear that the countries that installed the most open, democratic and inclusive political regimes are also the most economically successful ones.
Source: Inclusive institutions and economic development
Read this also: Why Nations Fail
This entry was posted on September 18, 2015 at 9:08 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.